Somalia: Askartii dishey Wasiir Siraaji oo Maxkamadda ciidamada la horgeeyey - Wargane News
Home Somali News Somalia: Askartii dishey Wasiir Siraaji oo Maxkamadda ciidamada la horgeeyey
Laba askeri oo ku eedeysnaa in ay dileen Wasiirkii Hawlaha Guud ee Soomaaliya Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji ayaa maanta la horkeenay Maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay u dhegaysato kiiska dacwadooda. Labada askeri ayaa kaamid ahaa ilaalada Hantidhawrkii Dowladda oo xilkiisa ku waayey dilkii Wasiir Siraaji.
Maxkamadda ayaa waxaa sidoo kale, ay u yeertay saraakiil ka tirsan madaxtooyada si su’aallo looga weydiiyo qaabka dilku u dhacay, maadaama wasiir Cabaas lagu hor dilay madaxtooyada xili uu halkaasi marayay, waxaana goobta lagu dhaariyay askar ka tirsan madaxtooyada oo habeenkaasi shaqada ku cornea.
Dood dheer iyo su’aala weydiin kadib ayaa garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay xeer ilaalinta ciidamada ka dalbadeen inay keenaan cadeymo dheeri ah, sidoo kale qareenada difaacayay eedeysanyaasha loo heysto kiiska dilka ah ayaa iyagane codsaday in maxkamadda dib loogu dhigo.
Wasiirkii Hawlaha Guud ee Soomaaliya Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji